မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၁- | Thaing Wizard
This entry was posted in Bando, Boxing, Martial Arts, Martial Arts Article and tagged ဆောင်းပါး, ဗန်တို, လက်ဝှေ့ by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.
1 thought on “မြန့်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပညာကျင့်စဉ်များ -၁-”
Pingback: ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၂- | Thaing Wizard